बरूवामा सञ्चालित भेट्रान भलिबल प्रतियोगिता अाज (बुधबार) का लागि स्थगित – SwadeshFM Online
बरूवामा सञ्चालित भेट्रान भलिबल प्रतियोगिता अाज (बुधबार) का लागि स्थगित
माडी न.पा. वडा नं. १ वडा कार्यालयको आयोजनामा गत कार्तिक १९ गतेबाट सञ्चालित भेट्रान भलिबल प्रतियोगिता आज बुधबारका लागि स्थगित भएको छ । एकाबिहानै सोमेश्वर माध्यमिक विद्यालयको शैक्षिक भ्रमणको बस दुर्घटनाबारेको दुःखद खबर आएसंगै आजका लागि निर्धारित फाइनल खेल स्थगन गरेको हो । भेट्रान भलिब प्रतियोगिताको फाइनलमा आज माडी नगरपालिका वडा नं ५ ‘ए’ र वडा नं ५ ‘बी’ बिच खेल हुने तालिका रहेको थियो । आजको खेल भोलि सञ्चालन गरिने सो प्रतियोगिताका संयोजक अमित लामाले जानकारी दिनुभयो ।
यसैबिच, खेलकूद तथा साँस्कृतिक समिति, माडी नगरपालिका वडा नं. ५ ले सञ्चालन गरिरहेको माडी स्तरिय प्रथम वडास्तरीय लीग फुटबल प्रतियोगिता २०७५ का खेलहरु तिहार पर्वभर स्थगन गरिएका छन् । खेलहरु आउँदो २४ बाट दैनिक ४ वटा हुनेगरी कार्तिक ३० गते सम्म सञ्चालन गरिने आयोजक पक्षले जनाएको छ ।
ठोरी क्षेत्रमा प्रथम ठोरी महोत्सव जारी